"Trump wuu bixiyay lacagta la siiyay gabadha aflaanta galmada ah jisha" - BBC News Somali
Duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani ayaa sheegay in Michael Cohen oo ah qareenka madaxweynaha uu sii bixiyay lacagta gabadha la siiyay, Trump-na uu u celiyay qareenka lacagtaas intii lagu gudo jiray ol'olihii doorashada ee 2016kii.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in uusan waxba kala soconin lacagtaas gabadha la siiyay, laakiin dhawaan ayuu qirtay in "heshiiskaasi" dhacay.
"Shirkad dhanka sharciga ah ayaa la sii mariyay lacagta, madaxweynaha ayaana dib ka bixiyay" ayuu yiri Giuliani oo la hadlayay telefeshinka Fox News.
Wuxuu sheegay in lacagtaas lakala bixiyay "dhawr bilood".
Giuliani wuxuu intaas ku daray in bixinta lacagtaas loo maray waddo sharci ah aysanna ka dhignayn kharash ol'ole doorasho, sababtuna ay tahay "in aysan ahayn lacag ol'ole doorasho loo adeegsanayay".
"Muddo bilooyin ah ayaan saadaalinaynay in dadka Maraykanka looga been sheegay 130kun ee la bixiyay iyo waxa uu madaxweynuhu ka ogyahay arrintaas. Ayuu Twitterka ku soo qoray.
Trump oo khasab kaga jawaabi doona su'aalaha Ruushka
"Trump oo gacantiisa ku qortay waraaq caafimaadkiisa ka hadlaysa"
War qoraal ah oo uu soo saaray Cohen oo lagu daabacay wargeyska New York Times ayuu ku sheegay in arrinta lacagta aysan waxba kala soconin ol'olihii doorashada ee Trump iyo shirkadihiisa, wuxuuna intaas ku daray in loo celinin lacagta u gabadha u shubay.
Atariisho loogu goodiyay "in ay faraha kala baxdo Trump"